Tsy maintsy ho lasa mpifankatia foana ve ny mpinamana lahy sy vavy?
Nancia Rahantarisoa, mpihira: Amiko aloha ambonimbony ny “possibilité” hiarahan’izy ireo ,indrindra moa fa efa ela no ninamana.
Mitandri-tena be foana ianao : Tokony ho tia anao amin'ny maha ianao anao izy na inona lesoka na fahalemena hanananao. Raha tsapanao fa voatery manova toetra na fihetsika ianao noho izy dia tsy ilay tena ianao amin'ny maha izy anao izany no heverinao fa mambabo sy mahaliana azy.
Manontany matetika ny zavatra ataony ianao : Tsy matoky azy tanteraka ianao. Ahoana anefa no hieritreretana ho avy iraisana amin'ny olona tsy atokisana akory. Aza mandainga amin'ny tenanao fa manara-maso ny ataony no tena ataonao isaky ny manontany izay ataony satria miahiahy ianao. Tsy tena fitiavana sy tsy fifampitsinjovana izany.
Miresaka momba ny olon-tiana taloha foana izy na ianao : Raha misy aminareo mbola manao anton-dresaka ny olon-tiana taloha, eny fa na dia miendrika fanaratsiana na fanakianana ilay olon-tiana taloha aza izany, dia midika izany fa tsy mbola nikatona tsara ny ratra mahakasika izany. Tsy mitovy ny tamin'ny vao niaraka ny toerany eo amin'ny fiainanao :
Lasa tsy dia maka ny heviny intsony ianao rehefa handray fanapahan-kevitra, tsy dia mivaky loha firy aminy intsony ianao. Tsy mampaninona anao mihitsy na tsy dia mifampiresaka firy loatra intsony aza ianareo. Niova ny laharam-pahamehany ao anatin'ny fiainanao. Raha ireo rehetra ireo no mitranga dia fantaro fa mety mifandany zara fotsiny ianareo fa tsy tena mifankatia.